[Tandremo: Maherisetra] Lahatsary Avy Ao Gaza Mitatitra Ny Namonoan’ny Tifitra Bala Afomanga Israeliana An’i Ramy Ryan, Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2014 3:51 GMT
Mampiseho fiara roa mpamonjy voina tonga malaky teo amin'ny toerana nitrangan'ny antambo ilay lahatsary nakarin'i Abu Shaar ho ao amin'ny YouTube, toerana nahitàna an'i Ramy Ryan nanangona vaovao momba ny zava-misy. Eo amin'ny 15 segondra ao anatin'ilay lahatsary, nahavoa ilay fiara ny bala afomanga voalohany. Efatra ambinifolo segondra taorian'izay ny daroka bala afomanga faharoa.
Nanomboka nivezivezy teny anivon'ireo mpikatroka mafàna fo tao an-toerana ilay lahatsary ary nalain'ny “Global Revolution Twitter Channel” an'ny Occupy Wall Street:
Nalefan’ i Naomi Wolf.
Ny 30 Jona dia ain'olona 131 no nafoy tao Gaza. Tamin'ny fotoana nanoratana, 1.361 no isan'ny maty tao Gaza, ka ankizy ny 315 tamin'ireo. Hatramin'ny 8 Jolay nanombohan'i Israely ilay fanafihana goavana namelezany ilay faritra mirefy 40 kilometatra ao Gaza, maherin'ny 6.780 no naratra. Nodarohan'i Israely baomba ny sekoly, toeram-pilalaovana, hopitaly, toby sy toeram-pialofana, nitondra nankany amin'ny taham-pahafatesan'olon-tsotra hatrany amin'ny 75%. Ny 28 Jolay, nodarohan'i Israely ilay hany toby mpamatsy herinaratra tao Gaza, nahatonga ireo olona 1,8 tapitrisa monina ao hiaina anaty haizina. Satria darohan'ny tafika Israeliana ireo toeram-ponenana manodidina, an'aliny ireo nanjary tsy nanan-trano hipetrahana ary voatery nialokaloka anaty toeram-pialofana tsizarizary.
Io no fanafihana fanintelony nataon'ny tafika Israeliana tao Gaza tao anatin'ny 6 taona. Ny faneriterena tafahoatra ataon'i Israely amin'ny faritra Palestiniana ao Gaza no antony mahatonga izao tontolo izao sy ny Firenena Mikambana hanondro io zara-tany io ho “faritra bodoin‘” i Israely